Isamsung yazisa ngefowuni esongekayo ngokusemthethweni | I-Androidsis
Iselfowuni yokusonga i-Samsung ngoku isemthethweni
Emva kwamarhe amaninzi, njengoko bekulindelekile kule veki, Ifowuni esongekileyo yakwaSamsung ityhilwe ngokusemthethweni. Ifowuni ebizelwe ukuvelisa amagqabantshintshi amaninzi kwintengiso, kwaye ivula ixesha elitsha kwimakethi ye-Android. Isixhobo esingavezwanga igama laseburhulumenteni, nangona kucingelwa ukuba igama laso yi-Infinity Flex, kwaye simele inkqubela phambili enkulu kwinkampani yaseKorea kuyilo, kuba ngumceli mngeni omkhulu ukuba nefowuni kwezi mpawu.
Isamsung sele inamava ngezikrini ezigoso, kodwa ngale Infinity Flex inkampani yaseKorea ihambile inyathelo. Sifumana isikrini sokusonga kwifowuni yokusonga. Xa ifowuni ivuliwe, yithebhulethi, kwaye xa ivaliwe, iba siselfowuni.
Nangona le ntetho ibingeyontetho enjalo. Ukusukela oko wazisa ifowuni, izibane zicinyiwe, ngenxa yoko khange kwenzeke ukuba wazi izinto ezininzi malunga nefowuni. Ngethamsanqa, sinemifanekiso ethile evela kulo msitho. Enkosi kubo sifumana umbono wento ebonelelwa yiSamsung ngesi sixhobo.
Xa esi sixhobo seSamsung sivulekile, iyafana nethebhulethi encinci, enescreen esikwere. Into emangazayo kukuba isikrini siyazivalelela, kwaye sikwanekrini yesibini, ebekwe ngaphandle kwesixhobo, esenza njengefowuni ephathekayo. Inkqubo ethe yatsala ingqalelo yamajelo eendaba. Ukuvulwa ngokupheleleyo, kunye nemowudi yethebhulethi yayo, inesikrini se-intshi eyi-7,3.
Nangona inkampani yaseKorea ibanga oko Okwangoku abakakulungeli ukubonisa konke. Le nkomfa ibiyinto ehamba phambili, ukuze sifunde ngakumbi malunga nesi sixhobo siza kuzisa kwintengiso. Kodwa i-Samsung ayabelananga naziphi na izinto ezichaziweyo kule fowuni.
Akukho nto iqinisekisiweyo ngegama lakhe. Isamsung ngokwalo ayiqinisekisanga naliphi na igama, nangona zimbini iindlela ezibonakala ngathi zifumana amandla ngalo mzuzu, kwelinye icala i-infinity Flex, esele sithethile ngayo, kunye negama elithi Galaxy X okanye iGalaxy F isekhona. Kodwa kujongeka ngathi kuzakufuneka silinde de sazi ngakumbi ngayo.
Ngokubhekisele kwinkqubo yokusebenza yesixhobo, kubonakala ngathi siza kusebenzisa uhlobo oluqhelekileyo lwe-Android. Nangona sinokulinda utshintsho kwi-interface, okoko iSamsung yazisa i-UI yayo entsha, esiza kuthetha ngayo kwelinye inqaku. Ujongano oluguqulela kwiimpawu ezizodwa zezixhobo ezinje. Ke iza nesoftware ehlaziyiweyo yinkampani yaseKorea.
Kwakhona, inkampani ibe noncedo lukaGoogle kuphuhliso lwesixhobo. Ngokukodwa kwinkxaso, kuba kuqinisekisiwe ukuba i-Android iya kuba nenkxaso yokusonga iifowuni. Isamsung ayisiyiyo kuphela ifemi enefowuni yezi mpawu, njengoko besesikuxelele ngaphambili, ezinye iimveliso ezinje Huawei, LG o Xiaomi Okwangoku baphuhlisa eyabo, eya kuthi ifike kwintengiso kwi2019.
Sikwabona ukuba kwenzeka njani inkqubo yokusebenza iyaziqhelanisa nento eza kufikelela kwintengiso. Kuba kucacile ukuba ukusonga iifowuni kuya kuba yenye yeendlela eziphambili kwi-Android ye-2019. Kwaye banokuba yinguqu kwimarike, nangona iya kuba ngabathengi abanelizwi lokugqibela.
Le yinto uSamsung angayityhilanga okwangoku. Yonke into ibonisa ukuba le fowuni ingaboniswa kwi-CES 2019 eLas Vegas ngokusemthethweni, kodwa okwangoku asinaso isiqinisekiso esiza kusazisa. Asinayo idatha kwixabiso elinokubakho kwesi sixhobo.
Into ecacileyo yile Iya kuba yimodeli ebiza kakhulu kwikhathalogu ye-Samsung. Kodwa asinalo ulwazi okanye uqikelelo olunokubakho ngeli xabiso. Njengoko ubona, umboniso wokuqala osishiya sineentandabuzo ezininzi okwangoku. Ke sinethemba lokwazi ngakumbi ngale modeli kungekudala.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Samsung » Iselfowuni yokusonga i-Samsung ngoku isemthethweni
Ukuphucula izibalo zakho ngokudlala iRetro RPG Math kunye nobugqwirha